Clubhouse ဆိုတာ ဘာလဲ?
💾 Saved Articles
Mar 20, 20212min read Apps
Clubhouse လို့ပြောလိုက်ရင် အခုအချိန်မှာ တော်တော်များများက မသိကြသေးပါဘူး။ အဲ့တာဘာကြီးလဲ လို့ မေးလာခဲ့သည်ရှိသော် ရှင်းပြရရင် အသံနဲ့ပဲ စကားပြော/နားထောင် လို့ရမယ့် application တစ်ခုလို့ပဲ ပြောရမယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ clubhouse ကို သိတာ မကြာသေးပါဘူး လ ပိုင်းပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ကုမ္ပဏီက Learning session မှာ သူဌေးက ပြန်ဝေမျှမှ ကြားဖူးတာပါ။ အဲ့ကျမှ ဪ Elon Musk တောင် join လာတယ်ဆိုတဲ့ ဟာပါလားလို့ သိရတာ။
အခုအချိန်ထိ Clubhouse ဟာ စမ်းသပ်ဆဲ အခြေအနေနဲ့ iOS မှာပဲ ရပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့် iOS တွေမှာပဲ ပေးသေးတာလဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောပြတတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေအရကတော့ Android လောက် အသုံးပြုသူမများစေချင်ပဲ လူနည်းနည်းကနေပဲ စမ်းသပ်သွားချင်တဲ့ သဘောကိုတော့ မြင်ရပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုရင် iPhone ကိုင်တဲ့သူတိုင်း တောင်မှ သုံးလို့မရသေးပါဘူး ဖိတ်ခေါ်တဲ့သူ ရှိမှသာ account ဖွင့်လို့ရမှာပါတဲ့ဗျာ။
ဟုတ်ပါတယ် နည်းနည်းတော့ ခွဲခြားခွဲခြားနဲ့ ရင့်သီးသလိုရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့လိုသိသိခြင်း အဲ့တာဆိုလည်း မသုံးဘူးပေါ့ကွာဆိုပြီး နေခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ ကုမ္ပဏီက ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ Clubhouse ကနေ စကားပြောကြမယ်ဆိုပြီး လုပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က register မလုပ်ရသေးကြောင်းပြောတော့ သူဌေးက invite ပေးတာနဲ့ join ဖြစ်သွားပါတယ်။
Invite လုပ်ခံရတဲ့အခါ phone number ကို ဒီလို message ဝင်ပါတယ်
သူက စ လုပ်ခဲ့တာက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် March 2020 ကိုဗစ် အမေရိကန်ကို ရောက်ခဲ့တဲ့အချိန် ဝန်းကျင်နားမှာပဲစပြီး launch လုပ်ခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။ ဘာကြောင့် နာမည်ကြီးလာတာလဲလို့ ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ idea ကလည်း ရိုးရိုးလေးနဲ့ကို ဆန်းတယ်လို့ ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။ Social network တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲကမှ သူက audio only ကို ရွေးချယ်ပြီး ဓာတ်ပုံဆိုရင်လည်း profile picture တစ်ခုတည်းကိုသာ ထားခွင့်ပေးပါတယ်။ ဖိတ်ခေါ်ခံရမှသာ အသုံးပြုခွင့်ရတဲ့ အခြေအနေက ပိုပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ဖမ်းစားတာလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Elon Musk တို့လို celebrity ကြီးတွေ join လာတာကလည်း တော်တော်လေးကို လူပြောများသွားခဲ့တာပါ။
စပြီး အသုံးပြုပြုခြင်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ ရိုးရှင်းမှုကို စပြီးခံစားရပါတယ်။ ဘာမှ အများကြီး လုပ်စရာလည်းမရှိပါဘူး။ Friends တွေကို follow လုပ်၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ Topic အချို့ကို follow လုပ်ပြီး ပေါ်လာတဲ့ room တွေမှာ လိုက်ပြီး join လိုက်ရုံပါပဲ။ Audio only chat app ဖြစ်တာနဲ့ အညီ အသံ အရည်အသွေးကတော့ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်။ Podcast တွေနဲ့ ကွာတာက သူက live ဖြစ်နေတာပါ။ ဘာကို သွားသတိရလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ barcamp တွေမှာ ဘယ်အခန်းက ဘာပြောနေလဲဆိုတာကို သိတဲ့အခါ ဝင်သွားပြီး နားထောင်နေရသလိုပါပဲ။ တစ်ကယ်လို့ စကားပြောချင်ရင်လည်း Raise Hand ခလုပ်လေးကို နှိပ်လိုက်ရင် Moderator က ခွင့်ပြုတဲ့အခါ ကိုယ်က speakers နေရာမှာ ရောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Speakers နေရာမှာ ဝင်ပြီး ပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေ
၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ လထဲမှာပဲ သူ့ကို investor တွေက funding လုပ်တာ ဒေါ်လာ $100 million တောင် ရှိနေပြီလို့ တစ်ချို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။ ဒီမှာ အသေးစိတ် ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
Buzzy live-voice chat app Clubhouse has confirmed that it has raised new funding — without revealing how much — inaSeries B round led by Andreessen Horowitz through the firm’s partner Andrew Chen. The app was reported to be raising ata$1 billion valuation inareport from The Information that la…
Android အတွက်လည်း လုပ်နေတယ်လို့ သိရတာကြောင့် မကြာခင်မှာ လူသုံးများလာနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့တာထက် တခြား စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ရမှာက ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေပါ။ ဈေးကွက်ထဲမှာ အသုံးပြုသူ ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ platform တစ်ချို့က audio room chatting တွေကို ထည့်လာနိုင်ပါတယ်။ Clubhouse မှာ record လုပ်လို့မရတာတွေ၊ စာရိုက်လို့မရတာတွေ အဲ့တာတွေကို ထည့်ပေးပြီး တစ်ချို့တွေ လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Audio Only လို့ ကြွေးကြော်ထားတဲ့ Clubhouse အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိ investors တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မယ့် ဆန်းသစ်မှုတွေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေကို ဆက်ခေါ်သွားနိုင်မလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါပဲ။
ဘယ်လို register လုပ်ရမလဲ
ခုနက ပြောခဲ့သလိုပဲ invite အလုပ်ခံရမှသာ အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်သူငယ်ချင်းထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် နီးစပ်ရာမှာ ပြောပြရင်း join လို့ရပါတယ်။ Invite အလုပ်ခံရတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ register လုပ်ရမှာဖြစ်ပြီး Invite အလုပ်မခံရသေးခင်မှာလည်း username ကို reserve လုပ်ထားခွင့်တော့ ရှိပါတယ်။
Invite မရှိသေးပေမယ့် username ကို reserved လုပ်ထားတာပါ
Invite အလုပ်ခံရပြီးလို့ join လာပြီဆိုတာနဲ့ နောက်ထပ် လူ ၂ ယောက်ကို ထပ်ပြီး invite လုပ်ခွင့် ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ အသုံးပြုရင် ပြုသလို invite လုပ်နိုင်တဲ့ အရေအတွက်ကို တိုးပေးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့မှာ နောက်ထပ် ၇ ယောက် Invite လုပ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်။ iPhone လည်းသုံးနေတယ် စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် invite လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ https://t.me/heinko ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။ ရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း ကျွန်တော့ရဲ့ Clubhouse https://www.joinclubhouse.com/@heinko မှာ follow လုပ်ပြီး မြန်မာနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ room တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
တော်လှန်ရေးကာလအတွင်း Subscribe လုပ်ထားသင့်သည့် Telegram Channel များ
Mar 18, 2021 1 min read နွေဦးတော်လှန်ရေးApps
Psiphon VPN (ဆိုင်ဖွန် ဗီပီအန်န်) အကြောင်း
May 2, 2021 1 min read Apps
Outline ကို သုံး၍ VPN Server တစ်ခု တည်ဆောက်ခြင်း
Apr 20, 20212min read Apps